I-RED BEE MEDIA IQALA UKUXHUMA KWE-RED LAB KWI-HILVERSUM, E-NETHERLANDS-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, i-Broadcaster ye-NAB Show Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » I-RED BEE MEDIA IQALA UKUXHUMEKA KWE-RED LAB KUNYE E-HILVERSUM, E-NETHERLANDS
I-RED BEE MEDIA IQALA UKUXHUMEKA KWE-RED LAB KUNYE E-HILVERSUM, E-NETHERLANDS
I-Red Bee Media iye yavula isibonelelo sabo sesibini seLebhu eLuhlaza kwi-Hilversum, eNetherlands. ILebhu yeLebhu Hilversum iya kugxila ekuphuhlisweni kwemveliso, ukuvavanya kunye nokubonakaliswa kwezisombululo ze-IP kunye nesofthiwe ye-acquisition video, ukunyanzeliswa, inxaxheba kunye neenkonzo zokuhambisa. Ngaphantsi kwegama leLebhu eliBomvu, iMedia Bee Media yenza iinjongo zayo ze-R & D ngeendawo ezininzi ezixhunyiwe kwihlabathi jikelele. ILebhu yokuqala ebomvu ivuliwe eLondon ngoFebruwari 2019 kunye nesibonelelo sesithathu siya kuqaliswa eStockholm kunyaka.
"ILebhu yeLebhu yeLilversum isinika ithuba elihle lokuphuhlisa nokuvavanya amandla ethu e-IP amandla, ukwandisa ixabiso esizisa kubathengi bethu kwiinkonzo zevidiyo ezibukhoma kunye nemveliso edeleyo. Sizibophezele ukubeka i-platform entsha innovation kwi ntliziyo yento esenza ngayo njengomniki-nkonzo olawulwa yi-agile kumashishini okusasazwayo kunye nabeendaba, "kusho uKris Langbridge, iNtloko yeeNkonzo zoLwazi, i-Red Bee Media.
"Ngokubambisana kweLebhu yeLebhan yaseLondon kunye neRebhu yeLilversum, ngoku siyakwazi ukubonisa ukuphela kwee-workflows ze-IP phakathi kwamazwe amaninzi kwaye sibonise indlela i-Red Bee Media ekhokela ngayo imboni kwi-teknoloji ye-IP yesikhulumi esikhulu", utshilo uDavid Travis , IGosa leNtloko yeGosa lePhothifoliyo, iMedia Bee Media.
Ukuqaliswa kweLebhu ebomvu i-Hilversum, iMedia Bee Media yenza isilingo esiyimpumelelo se-technologies yenkxaso ye-IP. Ulingo lubandakanya ukuvavanya ukuba unakho ukuhambisa ividiyo engakhuselekanga ngokuxhamla okuxhamlayo (2 x 35 km) ukusuka e-Amsterdam Arena ukuya kwi-MCR yokuhlola i-Red Lab Hilversum. Ngoxhumano lwe-IP oluzinzileyo lwe-100%, ukuhambisa i-1080p HLG HDR yesigxina, uvavanyo luyimpumelelo.
"Olu vavanyo lwaluyimpumelelo enkulu kwaye luqinisekisile iiplani zethu zokusabalalisa iinkqubo zexesha kunye nokunikezelwa kwepakethe ezinzile. Sakwazi ukunweba nokuphucula ubuchule be-teknoloji yethu yangoku, ukongeza iinkalo eziphazamisayo kwigazi. Ngenxa yolu vavanyo, ngoku sinalo uluhlu olutsha lweengcamango ezinomdla ekuhloliseni kunye namaqabane ethu "utshilo uHenk den Bok, uMphathi weMveliso oyiNtloko, iiNkonzo zoLwazi, iMedia Bee Media.
Izixhobo zokuvavanya Izicwangciso ze-IP ezisisiseko zenkxaso yevidiyo kunye neenkonzo zokuhambisa (kubandakanya ukuhanjiswa kwevidiyo, ukuguqulwa kwe-SD, IPPGA, ukuzenzekelayo, ukulawula nokubeka iliso)
Uphuhliso lomkhiqizo izisombululo ezintsha zokuhlangabezana nemingeni ehambelana nokufudukela kwiinkonzo ezisekelwe kwi-IP (kubandakanywa nokuzinza kwePTP, ukufezekisa ilahleko zepakethi kuwo wonke amanethiwekhi, kunye nokukhuseleko).
Imiboniso ukubonisa iipotifoliyo zeenkonzo eziphathekayo eziBomvu ze-Red Bee kwigalelo levidiyo ephilayo, i-encoding-based based encoding kunye neenkonzo zokuhambisa
UkuPhepha kwi-het Nederlands
I-Press Release - I-Lab ebomvu i-Hilversum - (NL) 2019-07-10
Ngolwazi olungakumbi qhagamshelana
UJesper Wendel, iNtloko yoNxibelelwano, iMedia Bee Media
Malunga ne-Red Bee Media
I-Red Bee Media iyinkampani ehamba phambili yeenkonzo zesevisi zeendaba zesebe zabasebenzi abangaphezulu kweenkonzo zeendaba ze-2500 kunye neengcali zokusasaza. I-ofisi yeNtloko yaseLondon, i-UK, i-Red Bee Media inikezela ngeenkonzo ezivela kwii-11 eziphambili kwihlabathi jikelele. Yonke imihla, izigidi zabantu kuzo zonke iizwekazi zibukela iinkqubo zethelevishini ezilungiselelwe, ezilawulwayo kwaye zisasazwa ngabasebenzi be-Red Bee Media. Unyaka ngamnye, ishishini linika ii-4 iiyure zezigidi zeeprogram ezingaphezu kweelwimi ze-60 + kwii-TV ze-500. Iinkonzo ze-OTT ze-Red Bee Media ziquka ukuhanjiswa kwezinto ezihambayo zezithuba ze-233 zabasasazo kunye nezithuba ze-119 ezizenzekelayo kubanikezeli bee-1.7 ezigidi. Iphothifoliyo yokufumana i-intanethi yenkampani ibonisa ngaphezu kwee-movie ze-10 zeefilimu kunye neeprogram zeeprogram, ezibandakanya iilwimi ze-25, kwaye ziquka idatha yesiseko kunye neepesenti ze-90 yazo zonke iinkqubo ezitholakala kwi-TV yemveli, i-VOD ne-SVOD. I-Red Bee Media inikezela ngeeyure ze-200,000 zegama-magama ngonyaka-ngaphezulu kweeyure ze-70,000 ezihlala kuyo. I-Red Bee Media iyona mlinganiso olinganayo nomqeshi, ngokugxininisa ngokucacileyo ekufumaneni ukuhlukahluka kunye nokudala indawo yokusebenzela ebandakanya wonke umbutho. www.redbeemedia.com
Izithuba ezandwendwe ngu-Ericsson (ndinibone nonke)
I-RED BEE MEDIA POWers NEENKXASO ZOKUGCINA IMveliso yeCanal + NGOKUHLAZIYA I-FNM FESTIVAL 2019 - Julayi 31, 2019
I-RED BEE MEDIA IQALA UKUXHUMEKA KWE-RED LAB KUNYE E-HILVERSUM, E-NETHERLANDS - Julayi 10, 2019
I-RED BEE MEDIA ABAKHULU NABASEBEDISH NENDA - UKUKHOKELA UKUBHALA KWEENKQUBO ZOKUBHALWA KWEZINDAWO ZOKUSEBENZA KWI-HOTEL ROOMS KWIHLABA NGONYAKA - Julayi 9, 2019
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Cobalt Encoder Igalelo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw OTT I-Red Bee Media ILebhu ebomvu SoftAtHome, MStar, iCES2017 Iintetho kunye nemisrya BuTeknoloji TVU Networks I-Ultra HD Forum Injini yeVidiyo	2019-07-10
Previous: I-Audio Visual Production Specialist